Atorinay anao ny fomba fanaovana sarintany ny Google Assistant miaraka amin'ny lakile Bixby | Androidsis
Ahoana ny fomba hametrahana ny lakile Bixby hanokafana ny Google Assistant raha tsy avelan'ny Samsung ianao
Samsung nanavao ny Bixby omaly mba hahafahan'ny fampiharana na baiko hahetsika. Ny zavatra tokana izay tsy mamela amboary ny lakilen'ny Bixby hanokafana ny Google Assistant. Izany hoe, na dia mikaroka amin'ny lisitry ny fampiharana aza ianao dia tsy hiseho izany.
Soa ihany fa misy fomba iray hialana amin'izany hahafahantsika manamboatra ny lakilen'i Bixby hanokatra ny Google Assistant. Ary mba hahafahantsika mamelona izany bokotra Bixby izany amin'ny Mpanampy Google, toy ny nifandraisantsika tamin'ny fampiharana hafa.
Ahoana ny fomba handaminana ny bokotra Bixby hanokafana ny Google Assistant
Efa nohazavainay omaly ny fomba handaminana ny bokotra Bixby handefa baiko na fampiharana. Araka ny efa nazavainay, ao amin'ny lisitry ny rindranasa izay miseho rehefa misafidy ny safidin'ny gazety iray na roa izahay Google Assistant dia tsy hita na aiza na aiza.
Mipetraka ny fikafika amboary ny fampiharana avy amin'ny apk izay ampidininay. Amin'izany fomba izany, rehefa misafidy azy amin'ny lisitry ny fampiharana rehetra eo amin'ny findaintsika isika, dia afaka mampiasa Google Assistant amin'ny alàlan'ny gazety tsotra, na avo roa heny raha toa ka amboarintsika azy, ny bokotra na ny lakile Bixby. Ataovy:
Handeha isika misintona ny fampiharana izay hamela antsika ampiasao ny Google Assistant: Bixby Button Assistant Remapper APK
Mametraka ny fampiharana izahay.
Ankehitriny mankany isika Fikirana> Safidy mandroso> Bixby Key.
Misafidy tsindry indroa izahay hanokatra Bixby.
Mifidy gazety iray izahay.
Mila mihetsika isika, amin'ny efijery manaraka, fampahavitrihana gazety tokana ary avy eo tsindrio ny kisary gear mba hisafidianana ilay app.
Mitady izahay Bixby Button Assistant Remapper ary izahay no mifidy azy.
Ankehitriny dia tsy maintsy tsindrio fotsiny ny lakilen'i Bixby ary hifidy ny Mpanampy Google izahay.
Manoro hevitra izahay hampiasa ny safidy hanokatra ity rindranasa ity hatrany mba hanombohana hatrany ny Google Assistant.
Hanana isika nandamina ny bokotra Bixby handefasana ny Google Assistant Avy hatrany. Vahaolana tsotra ary antenainay fa tsy "tapaka" Samsung amin'ny fanavaozana ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana ny fomba hametrahana ny lakile Bixby hanokafana ny Google Assistant raha tsy avelan'ny Samsung ianao
Ny Meizu Note 9 Lite dia mandalo ao amin'ny AnTuTu ary naseho ireo fepetra manokana ilaina